Semale Gids: Hoe U Uw Concurrenten Uitziet Mu E-Commerce Bedrijf
SeCommerce mutengesi, iwe unofanirwa kuchengeta mabheti pamakwikwi. Sei? Chokutanga, zvinokubatsira kuti unzwisise masimba emusika. Chechipiri, uri nani kuziva nezvezvinhu pazvinouya pakushambadziramishandirapamwe uye zvechokwadi, inokubatsira kuti uyanise bhizinesi rako kubva kumakwikwi emabhizimisi - curso de fotografia en linea.
Nezvozvi mupfungwa, Jason Adler, nyanzvi ye Semalt Digital Services, inopa mazano ekuti ungatevedzera sei kukwikwidzana kwako.
Tanga ne SEO
Gadzirira boka kuti riongorore maitiro eSeO ayo iwe makwikwidzi ari kushandisa. Tsvaga nhamba yekushamwaridzana kumashure iyo inowedzera kudzidza kuti mawebsite anobatanidza kusvika kupi. Kana uchinge watora deta iyi, shandisa mawebsite yakoVanokwikwidzana vanobatanidza uye vanoona kana iwe uchikwanisa kuisa nzira iyo motokari kubva kwavari kuenda kuchitoro chako.
Tora muenzaniso uyu. Pose pandinenge ndichitsvaga hukama hwevatengi vedu, ini chengetedza makwikwi emakambani achishandisa Semalt Analyzer. Inoshandisa 'Open Site Explorer' kuunganidza mawebsite avo (makwikwi). Mushure mokunge ndatora data iyi inokosha, ini ndinotsvakurudza kuti ndikumbirire kumashure kumashure uye zvimwe zvose zvinodiwa kuita chirongwa.
Tarisa makwikwi 'social media
Munofanirawo kutarisa makwikwi enyu mumagariro evanhu kuti vaone zvavanoda management strategy. Pane chigumo chinoshamisa chinonzi FollowerWonk chinokubvumira kuti uone kuti ndiani ari kuvatevera pa Twitter uye kuti peji rako pachako rinotarisana navo sei. Tenda kana kwete, MuteveriWek anogona kukuudza iwe ari kukutevera iwe, muvengi wako uye kunyange izvo zvinotevera iwe mose. Kana ukacherechedza mumwe munhu achikutevera iwe nomupikisi wako, ipapo pane mukanaiye ane hanya nemusika wako uye ndiye munhu anofanirwa kubatana naye.
Chimwe chekushanda webhu, Buzzmo inokubvumira kuti uzive zvakanyanya zvakagadziriswa (mifananidzo,mavhidhiyo kana mablogi) pamapeji omushuwaridhi wemagariro evanhu. Shandisa iyi deta kuti uongorore mafungiro matsva emapeji ako ehupfumi.
Funga nezvechiitiko chekushandisa
Ita sokuti iwe uri muchengeti uchishandisa webhutiro yako yekwikwidziro neicho kushanyira iyo. Ziva chimwe chinhu pane katepaiti, chiwedzera kune ngoro yako uye ramba uchiongorora. Zvakanga zviri nyore sei izvozvo? Zvakatora nguva refu here? Edzaizvimwechetezvo nekuisa zvichemo / mibvunzo uye chengetedza kana webhusaiti yako ichipfuura izvi kana kuti kwete. Iwe unogonawo kuona kuti chii vatengi vanofanira kutaura nezvemabhizimisi enyu. Trustpilot platform inofanira kukubatsira kuti uite izvi zvakanaka.
Pfungwa dzekutengesa uye kutengesa
Teerera kutengesa uye kutengeserana kwevadzivisi vako kuti vatsauremaitiro avo. Nzira yekutanga inogona kunge yakanyorera mabhuku avo ezvinyorwa kuti iwane zvitsva zvitsva uye zvinokurudzira. Imwe nzira inogona kuve nekusika pega Twitter peji yevhisikwi kana Google Alerts kuti ive iri muchikwata chezvinhu zvose zvarudzo. Izvi zvinoshanda munguva chaiyo.
Kunyange zvazvo kuenzanisa kwakawanda kunogona kuitwa paIndaneti, kune dzimwe mamiriro mazviriinogona kuitwa pasina. Nemuenzaniso, kana iwe wakakokwa kune imwe nzvimbo yekutengeserana kana musangano, bvunza chero munhu anoramba achienda kune chimwe chinhu chavomaonero pamaitiro ako. Chii chavanoda kutaura pamusoro pemakwikwi enyu? Shandisa iyi ruzivo pamwe chete nezvinoonekwa iwe pachako kuti uone.